HAB-QORAALKA IYO TAARIIKHDA FAR-SOOMAALIGA Qeybti 5aad – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
HAB-QORAALKA IYO TAARIIKHDA FAR-SOOMAALIGA Qeybti 5aad
By aaheybe / October 6, 2019 October 6, 2019
IYO TAARIIKHDA FAR-SOOMAALIGA
OLOLAHA HORUMARINTA REER MIYIGA
•	Labaatan iyo labo aamustiyo, shaqal irmaaneeya
•	Amran iyo tilmaamiyo gudbe, aade iyo jooge
•	isku dare xiriiriye falkaab, erayadeennii ah
•	Ebyan iyo haddaan magac u yaal, ku arkay joornaalka
•	Mar haddii afkeygii la qoray, Aabe iyo Hooyo
•	Mar hadaan amaahsigii ka baxay, lagu ogoontoobay
•	Abaal waxaa leh nimankii fartaa, soo abaabulaye
•	Amiirnimo sin iyo garab jirteey, nagu abuureene
•	Afafka qalaad iyo maxaa, eregta ii dhiibay
•	Anaa macallimoo raba dad loo furo iskuullaade.
---------------------------- Abwaan: Cabdulle Raage Taraawiil
Ol Olaha Horumarinta Reer Miyiga (Somali Rural Literacy Campaign) wuxuu ahaa barnaamij qaran oo caalamka uu la fajay ummada Soomaaliyeedna tusay kalsoonida ah in ay bulsho wax qabsan karto. Maahmaah Soomaaliyeed ayaa ah, "Rag tashaday cir tararay wey toli karaan taako labadeede", oo macnuhu yahay mar haddii talo la helo wax aan la soo koobi karin ayuu aadmigu qaban karaa. "Rag" waxaa loola jeedo dad oo dhan, rag iyo dumar ayaana ku jira.
Sanad guuradii seddexaad ee kacaanka ayaa bishii Oktoobar 21 sanadkii 1972 waxay dawladdu sii sheegtay in la qori doonno farta afka Soomaaliga laga billaabo sanadka soo socda ee noqon doonna 1973. Waxayna sanadkii 1973-dii bishiisi koobaad dawladdu ku dhawaaqday in la billaabo hirgalinta farta rasmiga ah ee Soomaaliga.
OL-OLIHII FAR-SOOMAALIGA “Aug,1974-Mar.1975” oo markii hore	caasimada Muqdisho ama Xamar ka bilowday iyada oo shaqalaha Dawladda lagu amray inay 3 bilood ku bartaan qorista iyo akhrinta ka dib markii farta la qoray 1972dii. Mudo kordhis ayaa lagu sameeyay amarkii hore oo saddex bilood oo dheeraad ah ayaa shaqaalaha loogu daray si aysan shaqadood u lumin.
Taariikhda wanaagsan ee wadanka Soomaaliya iyo waxqabadkii dowladdihii wadanka ayaa waxaa ka mid ah qoristii afka hooyo, Af-Soomaali iyo ololihii xigay oo dhowr sanadood socday. Macalimiin 28,000 gaaraya, muruq la biirshay iyo murti ayaa lagu fuliyay O-Olaha Horumarinta Reer Miyiga.
WAJIYADA HIR-GALINTA FARTA-SOOMAALIGA
1.	Seddex waji oo karti iyo maamul wanaag ka muuqdo ayaa loo billaabay hirgalinta farta Soomaaliga.
Markii koobaad, waxaa la amray in shaqaalaha dawladda sare ay muddo seddex bilood ah ku bartaan qorista iyo akhrinta Far-Soomaaliga, inkastoo haddana seddex bilood oo kale loogu daray si ay qummaati ugu bartaan.
2.	Markii labaad, waxaa la amray in far barashada Soomaaliga laga hir-galiyo iskuulaadka magaalooyinka waawayn iyo dagmooyinka. ololahan wuxuu socday, hal sano waana laga guul gaaray.
3.	Markii Seddexaadna, waxaa loo jeedsaday ololihii reer miyiga iyo ka hirgalintii farta. waa ololihii ugu dhibka iyo kharashka badnaa, uguna muddada dheeraa intii far Soomaaliga la hirgalinayay. Waxaa lagu guulaystay in tuula kasta iyo reer meel ku jira oo kastaba macallin la gaarsiiyo.
Sidaas maamul wanaagga iyo maskaxdu ku dheehan tahay ayaa waddanka dhan seddexaas olole loogu wada baahiyay qorista iyo akhrinta farta Soomaaliga.
Ololaha hirgalinta Far Soomaaliga waxaa ku baxday Maaliyad dhaqaale oo aad u culus, waxayna dawladdu markii ay ka faraxalatay dhammaystirkii baahinta ololeyaasha baris barashada farta, soo saartay, tirakoobyada dadka la gaadhsiiyay habka geeddi socodkii baris-barashada ee muddada socotay. Qoraal ahaan waxay dawladdu sheegtay inay ka faa’iidaysteen dad tiradoodu tahay 1,257,779 oo shaqsi. Ololahan oo halku dhiggiisu ahaa “Bar ama Baro”.
Barmaamijkan horumarinta hirgalinta Far Soomaaliga ee socday intii u dhaxaysay 1972-1975-tii waxaa ka qayb qaatay shaqaalaha dawladda dhammaantood, saraakiisha ciidammada qalabka sida iyo ardayda heerkasta dadkaas oo wadartoodu ahayd 28,000 oo qof. Markaas ayay boqolkiiba tirada dadka waxna qora waxna akhriya gaareen 55%.
Hawlahaas iyo dhaqan galintooda, iyo habsamida maamul wanaagga markuu caalamku arkay ayay dadka Soomaaliyeed magac iyo maamuus dunidoo dhan ah ka heleen, luuqadda Af-Soomaaliguna waxaa loo aqoonsaday inay tahay luuqadda Seddexaad ee Qaaradda Afrika, Carabiga iyo Howsaha oo kaalinta koobaad iyo midda labaad kala ahaa iyaguna illaa haatanna waa sidii.
KAALINTI RAADIYO MUQDISHO, RAADIYO HARGAYSA IYO WAKAALADAHA QARANKA
Laga bilaabo Oktoobar 21, 1972 ilaa barnaamijka ol-olaha waxbarashada oo xaflad lagu soo af-jaray, barnaamijyo aan kala go' laheyn ayey Dawladda dalku ku soo bandhigtay laamaha warfaafinta wadanka.
Wasaaradihii ku howlanaa fulinta ololaha waxbarashada waxay wadanka oo dhan gaarsiiyeen qoraalo, barnaamijyo ka baxayay raadiyaha iyo aalado kale. Waxaa barnaamijka hor-kacaysay Wasaarada Hanuuninta Dadwaynta oo ay wakaalado badan hoos iman jireen sida:
	Wakaalada Filimada
	Tiyaatarka Qaranka
	Radiyow Muqdisho
	Radiyow Hargeysa iyo
	Wakaalada Madbacada Qaranka
Aqoonsi caalami ah ayay heshay bulshada Soomaaliyeed iyo amaan howl badnaanta Dawladda. Af Soomaaliga dhanka horumarka luqadeed, wuxuu noqday afka saddexaad ee Qaarada Afrika. Luqadaha Af-Carabiga iyo Af-Howsa ayaa kaalinta 1aad iyo 2aad ah.
Arrimahan oo dhan waxay dhaceen toban sano iyo bar ka dib markii gumeysigii Afrika soo af-jarmay inta badan wadamada qaaraduna ay xoriyad heleen haba u jireen xoriyadahaas heerar kala duwan.
Maxdwaynaha Tansaaniya Nayeeri mar uu la hadlayay bulshada wadankiisa wuxuu yiri, "Anaga waxaan hadal hayno Soomaalida ficil ahaan ayay u qabtaan." Wuxuu ula jeeday qoristii afka iyo ololahii ka dambeeyay ee lagu baahiyay farta magaalo, degmo ilaa heer tuulo.
unnaanad kadib 46-sano, bulshada Soomaaliyeed waxa ay ku caana maashay guushii lasoo hooyay waqtigaas. Waxa ayna afka iyo huurkaba uga duceysaa halgamayaashii guushaas inoo horseeday, si hagar ka fogna u hirgaliyay himiladii ummadooda iyo dhasha ummadaan dhaxli doonta. Waxaana dhab u rumoobay tuducii xiligaas uu ku guul geerarayay Taraawiil ee aheyd “Amiirnimo sin iyo garab jirteey, nagu abuureene”. Abwaanku waxa uu si qalbi furnaan ugu ammaanay raggaasi inay naftood hurayaal u dhigmaan, mahadcelintoodana aan maarna la inkiri Karin.Waxa ay ka tageen dhaxal ummadeed “adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinta aan la tabin”.
W/D: Daljir C. Halgame: